जोखिमयुक्त ठाउँमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडी बढ्यौँ भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ ः उप प्रमुख लामा
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७७-५-२२ गते १२०२ पटक हेरिएको
कोरोना महामारीको कारण विश्व नै अक्रान्त बनेको बेला नेपाल पनि कोरोना संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेन् । त्यस्तै नेपालमा केही केही स्थानमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ । कोरोना संक्रमितको हब नै बनेको छ । यही सम्बन्धमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको लागि कसरी व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने विषयमा कमलामाई खबर डटकमले नगर उप प्रमुख शान्ती लामासँग गरेको छलफल
प्र.लालबन्दीमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ?
नगरभित्र करिब ७० जनाको हाराहारीमा संक्रमित छन्। हरेक पटकको परीक्षणमा कोही न कोही संक्रमित भेटिएकै छन्। कतिपय अस्पताल र कतिपय होम क्वारेन्टाइनमा छन्। बाहिरी जिल्ला र विदेशबाट आउनेलाई नगरका १७ वटै वडालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरि लालबन्दी २ मा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा क्वोरन्टाइन र आइसोलेसनको स्थापना र सञ्चालन गरेका छौं। यसरी आएकालाई १४ दिन राखेर पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै संक्रमण नभएकालाई घर पठाइएको छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न हामी प्रयासरत छौं।
प्र.समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छ। अब नियन्त्रणका लागि के प्रयास भइरहेको छ ?
संक्रमित कम हुँदा कोरोना आइसोलेसनमै राखेर उपचार गरियो। आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले तनमन लगाएर काम गर्नु भयो । एक व्यत्तिःाबाट अर्काे व्यक्ति तथा समुदायमा कोरोना नफैलियोस भनेर जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन निर्माण गरियो । नगरका जनप्रतिनिधिहरु,स्वास्थ्यकर्मीहरुका साथै सबै तह र तप्काबाट सहयोग साथ पाएका कारण जिल्लामै सबै भन्दा कम संक्रमित रहेको नगरमा अहिले अवस्था सामान्य बनेको छ ।संघीय सरकारले सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने जुन नीति ल्यायो, यसले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलाउन सहयोग गरेको महसुस भएको छ। तर पनि नगरबासी सजग भएका कारण त्यस्तो समस्या आएको छैन ।
प्र.आइसोलेसन असुरक्षित छ भन्ने गुनासो आएको छ नी ?
आइसोलेसन स्थल वरिपरी जंगल क्षेत्र,लामो समयदेखि प्रयोग बिहिीन भवनहरु भएका कारण केही समस्या आएको हुनसक्छ तर जसरी गुनासो आएको छ त्यस्तो छैन ।नगरपालिकाले सकेको सुरक्षित बनाएको छ । प्रयोग बिहीन भवन भएका कारण समस्या आएका थियो त्यो व्यावस्थापन भइ सकेको छ । सुरक्षाकर्मीहरु,चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सजग एवं सुरक्षित रही सेवा प्रवाह गर्नुभयो जसका कारण नगरमा कोरोना भयानक हुन पाएन ।
प्र.आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हामीकहाँ आइसोलेसनमा कुनै चिजको कमी छैन । संघीय र प्रदेश सरकार छ तर समन्वयात्मक भूमिका गरेन । संघीय सरकारले पाँच महिनाअघि नै बिमा र जोखिम भत्ता व्यवस्था गरेको कुरा आए । अरू सेवासुविधाका कुरा छन्। क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने भनेको छ। सबै खालको उपचार प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ। तर आर्थिक हिसाबले केन्द्र सरकारबाट सहयोग छैन। तर स्थानीय तहले राम्रो तवरले व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी बहन गरेको छ। स्थानीय सरकार व्यवस्थापन गर्न तयार छ तर केन्द्र सरकारको सहयोग हुनुपर्छ । तर कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने परिपाटी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी अहोरात्र खटिएका छौं। छुट्टै आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न र जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाईन बनाउन हामीसफल भयौँ । यो खुसीको कुरा हो ।
प्र.पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाउँदा संक्रमित पत्ता लगाउन पनि कठिन भयो होला नि ?
लालबन्दीबाट पिसिआर परिक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर पठाइयाँैँ । हेटौडा पठाएको स्वाबको रिपोर्ट चाँडै आएको भएपनि जनकपुर पठाएको स्वाबको रिपोर्ट ढिलो हुँदा केही समस्या भयो । जसका कारण केही समस्या भएको थियो ।
प्र.लालबन्दीमै परीक्षण गर्ने अवस्था भएको भए के हुन्थ्यो होला ?
स्वाब लिएको २४ घण्टा भित्रमा रिपोर्ट आउने व्यवस्था हुन्थ्यो । नगरबासीहरुले समयमै सुविधा पाउनेथिए । कोरोना समुदायस्तरमा फैलिने थिएन ।नगरको अर्थ तन्त्र तहस नहस हुने गरि लक डाउन घोषणा गर्नुपर्ने थिएन ।
प्र.नगरमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिनु सचेतनाको पाटो सबल नभएको हो कि ?
कतिपय अवस्थामा नबुझेर पनि मानिसहरुले सर्तकता नअपनाउँदा समस्या आएको हो तर पछिजव नगरबासीले कोरोना केहो लक डाउन कसका लागि रहेछ भन्ने बुझेपछि समस्या समाधान भयो । चुनौतीको सामना त गरि रहनु परेकै छ । तरपनि अहिले पहिलाको तुलनामा सहज भएको छ ।
प्र.अहिलेसम्मको तयारी र व्यवस्थापनबाट ढुक्क रहने अवस्था छ त ?
मैले अघि पनि भनें– सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्यो। सबै तहगत सरकार त हुनैपर्यो। सम्बन्धित पक्ष जस्तो– स्वास्थ्य क्षेत्र, पत्रकारिता, नागरिक समाज, कर्मचारी सबैले केही न केही जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भनेर जोखिम कम गर्न साझा प्रयत्न गर्नुपर्छ। मेरो योगदान आवश्यक छ भन्ने बिर्सनु हुन्न तेती भएमा ढुक्क हुन सकिन्छ । जसबाट संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । अरूलाई जिम्मेवार बन भन्नेले पनि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। हामी पाँच महिनायता निरन्तर जुनसुकै सवालमा खटिएका छौं। जोखिमयुक्त ठाउँमा सबैले हातेमालो गर्यौं भने पक्कै पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
प्र.नगरले घोषणा गरेको लक डाउन कार्यन्वयन गराउन एक पटक निकै कठिन भयो ?
कोरोना साह्रै खतरा रोग हो, सतर्क होऊ भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौं। एकबाट अनेक हुन्छ समुदायमाफैलिन्छ भन्दा नगरका केही व्यापारी व्यासायीहरुले अटेर गरेका कारण समस्या भएको थियो । अब त्यो अवस्था नआउँला । किनकी सबै नगरबासीले बुझिसक्नु भएको छ ।